Ọdịdị akara kacha mma dabara mkpa nzacha dị mkpa.
Nkenke nkenke isi iji belata ọnwụ mgbali ọnwụ.
Nhazi ntinye akụkụ
Ogo ụlọ anọ 01#, 02#, 03#, 04#
Ụgbọ mmiri kachasị ọnụ ahịa n'ahịa
V-clamp Ejiri ngwa nzacha akpa ọtụtụ akpa na ASME VIII lee ọkọlọtọ VIII DIV I. Iji bụrụ arụmọrụ yana nchekwa na ịdịte aka, ọ dị iche na nzacha akpa akpa mkpọchi. Ị nwere ike mepee ma mechie mkpuchi ya n'enweghị ngwa ọrụ ọ bụla. Ọ dịghị mkpa ịtọghe ma ọ bụ mechie ihe iri na abụọ ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ bolts n'aka, iji ghọta ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji mepee ma mechie, dochie akpa nzacha ngwa ngwa wee belata ike ọrụ onye ọrụ.
Ọ dị mfe ugbu a imepe ma mechie ụgbọ mmiri gị maka ịgbanwe akpa nzacha n'ime naanị nkeji abụọ!
Ngwa ọrụ enyi anyị nke davit ogwe aka ọtụtụ akpa na -ewu site na akpa 2 ruo akpa 24 iji zute ọnụego mmiri mmiri chọrọ ka ọ bụrụ 1,000 m3/hr, ihe nzacha akpa akpa niile na ASME VIII lee ọkọlọtọ VIII DIV I.
Oge opupu ihe ubi anyị na -enyere arịa nzacha akpa ọtụtụ aka site na akpa 2 ruo akpa 24 nwere ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi mmiri pụrụ iche iji mezuo oke mmiri chọrọ ka 1,000 m3/hr, ihe nzacha akpa niile na ASME VIII lee ọkọlọtọ VIII DIV I.